Dhageyso: Musharax Shariif Xasan Oo Hambalyo U Direy Bulshada Koonfur Galbeed – idalenews.com
Dhageyso: Musharax Shariif Xasan Oo Hambalyo U Direy Bulshada Koonfur Galbeed
Baydhabo(INO)- Iyadoo Wadamada caalamka oo dhan ayaa u noqdey sanad cusub,dabaal degyo iyo isu hambaliyeyna ayaa la is dhaafsanayaa,baraha bulshada ay wararka isku dhaafsadaan waxay yihiin meelaha sanadkan cusub 2017-ka la isku xasuusinayo inuu wanaagiisa ilaahay dadka iyo dalka waafajiyo.
Madaxda caalamka ayaa hambaliyo diraya,dhanka soomaaliya madaxda dowlada wakhtigooda dhamaanaya iyo madaxda maamul gobaladyeeda dalka soomaaliya ayaa hiigsanaya in sanadkan cusub xaalada dalka hadii ahaan laheyd horumarka wax weyn ay ka badalaan,waliba soomaaliya ayaa sanadkan waxaa u dhalan doonta dowlad cusub oo soomaaliyeed.
Musharaxa madaxweynaha dalka ahna Maxweynaha dowlada koonfur Galbeed shariif Xasan sheikh Aadan ayaa noqdey mas’uulkii ugu horeeyey oo sanadkan cusub wareysi gaar ah siiyo Radio IdaleNews ee Xfiiska Magaalada Baydhabo,isagoona u hambaliyey ummada soomaaliyeed.
“Cod Wariyaasha soomaaliyeed waxay kaalin weyn ka qaateen horumarka dalka uu ku tilaabsadey sanadkii dhamaadey gaar ahaan wariyaasha deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya” Ayuu yiri Shariif Xasan.
Wareysigan gaarka ah madaxweynaha dowlada koonfur Galbeed shariif Xasan sheikh Aadan uu siiyey Radio IdaleNews ayaa waxaan ku weydiiney hamigiisa siyaasdeed ee uu sanadkan cusub damac sanyahay.
Musharax shariif xasan sheikh Aadan,ayaa baaq dheer u direy Madxda soomaaliyed.
Faysal dhaayow IdaleNews Online, Muqdisho
Aqriso: BFSoo magacaabay guddiga doorashada guddoonka baarlamaanka
UPDATE: Somaliland forces killed two civilians near Buhodle